‘बाटुलेचौर, देविस्थान मन्दिर,ठुलो पोखरीको पर्यटन प्रस्ताव तयार हुदैछ’–राजेन्द्र पौडेल । – MeroJilla.com
‘बाटुलेचौर, देविस्थान मन्दिर,ठुलो पोखरीको पर्यटन प्रस्ताव तयार हुदैछ’–राजेन्द्र पौडेल ।
पर्वतको प्रसिद्ध धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थल बाटुलेचौर मन्दिरलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने भएको छ । मर्मतसंहार र प्रचार प्रसारको अभावका कारण ओझेलमा परेको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १२ ठुलीपोखरीमा अवस्थित बाटुलेचौर क्षेत्रलाई विकास गर्न थालिएको हो । त्यस्तै मानव निर्मित जिल्लाकै सवैभन्दा ठुलो पोखरीलाई पनि संरक्षण गरिने भएको छ । भने, कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १३ खौलालाकुरीमा अवस्थित खौलाकोटको संरक्षण र विकासका लागि बिस्तृत सर्भेक्षण गरिएको छ । यसमा वडा कार्यालय र वडाध्यक्षले निकै चासो दिएर लागि परेका छन् । यी क्षेत्रहरुको विकास र संरक्षण हुन नसक्दा पटकपटक धर्ममा आस्था राख्नेहरु सहित स्थानीयहरुले निरासा प्रकट गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा कस्मा नगरपालिका १२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल संग रामकृष्ण लामिछानेले गरेको कुराकानीको संक्षेप–
१.वडाध्यक्ष ज्यु,पर्यटन प्रस्ताव तयार हुदै छ भन्ने कुरा बाहिरिएको छ । कति समय लाग्ला ?
–धन्यवाद । पक्कै सवैले भोगेको र जानेको कुरा जनप्रतिनिधीहरु नहुँदा यो बिषयले स्थान पाएन् ,स्वभाविक रुपमा चासोमा पनि परेन् । केहि समय पहिला वडाकार्यालयको पहलमा यहाँका राजनितिज्ञ,प्राबिधिक कार्यालयका प्रमुखलाई यहाँ भित्राएर हामीले बाटुलेचौर, देविस्थान मन्दिर,ठुलो पोखरी सहित छिमेकी वडाको खौलाकोट पनि अवलोकन गरा¥यैं । हाललाई प्राबिधीक समुहले ईस्टीमेट बनाउँदै छ । यी क्षेत्रको संरक्षणलाई स्थानीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने निशकर्ष छलफलवाट आएको हुदाँ प्रदेशका पर्यटन मन्त्री बिकास लम्साल र प्रतिनिधी सभाका सदस्य पद्म गिरीलाई अवगत गराईसकेका छौं । अपेक्षा गरौं छिट्टै यो कार्यको शुभारम्भ हुन्छ ।
२.यी क्षेत्र संरक्षण गर्न र पर्यटन प्याकेजको रुपमा सञ्ंचालन गर्न किन आवश्यक ठान्नुभयो ?
–आह,कस्तो जाहेज प्रश्न । पुरातन समयदेखि बाटुलेचौरको निकै ठुलो र महत्वपुर्ण धार्मिक इतिहास छ । राजा दशरथले आफ्ना भाञ्जा श्रवण कुमारको हत्या गरेको र पाप मोचन गर्न बाटुलेचौरमा आएर यज्ञ गरेको भन्ने विश्वासका आधारमा सोही समयदेखि सो स्थानमा पूजाआजा गर्न मन्दिरको निर्माण गरिएको मान्यता छ । यसैको आधारमा हाम्रा पुर्खजहरुले पुजाआजा गर्दै आएका थिए । मुख्य यहाँ खानेपानीको समस्या थियो । पछिल्लो बर्षहरुमा यसको संरक्षण गर्ने निकायपनि सेवासुबिधा उपभोग गर्न सहर केन्द्रित भए । अनि,गत ०७२ सालमाको भुकम्पले झन यसलाई ठुलै क्षती गरायो । यसको संरक्षण हुनपनि अझै सकेन । अब भने, हामी र हाम्रा वडावासीहरुको मागको आधारमा खानेपानी कार्यालयको पहल सहित यहाँ बर्षै पछि पानी उपलब्ध छ । मन्दिर परिसर खानेपानी,बिजुली लगायतका पुर्वाधारले भरिपुर्णमा पुगेको छ । मैले स्थानीय चुनावको समयमा यसको संरक्षण गर्ने कवोल पनि गरेको हुँ । जनप्रतिनिधी आईसकेको खण्डमा जनताको चाहन पुरा गर्नुपर्ने धर्म सम्झेर यसको संरक्षण गर्न ध्यान पनि हामीले दिएका छौं । बाटुलेचौर मन्दिर मात्र नभई,पोखरी छिमेकी खौलको खौलाकोटको संरक्षण गर्न विभिन्न निकायमा पहल गर्न पनि आग्रह भइसकेको छ ।
३.ग्रामीण सडकहरु वेहाल छन् । ठुलीपोखरी,अधेरीनेटा हुँदै पोखरा छोटो दुरीमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सुनिन्छ । सम्भव होला?
–यो पनि चासोको बिषय हो । हामी जनप्रतिनिधीको रुपमा आएको करिब १५ महिना भएको छ । कुस्मा कार्कीनेटाको बाटो यो खण्डमा पर्ने हो । केहि पहिला यो बाटोलाई पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा पार्न पहल भएको सवैलाई थाह छ ।,र अर्को कुरा ठुलीपोखरीवाट, अधेरीनेटा, आर्थर भदैरे हुँदै पोखरा सम्म पुग्न ३६ किलोमिटर लाग्छ । यो बाटो बन्यो भने कुश्मा बाग्लुङ सडक खण्डा भन्दा आधाले दुरी कम हुन्छ । हाल ठुलीपोखरीको रोहोटे देखि अधेरीनेटा सम्म बाटो निमार्णको काम भइरहेको छ । जसको निमार्णलाई कुश्मा नगरपालिकाले ४५ लाख विनियोजन गरेको हो । यसको निमार्ण कार्य सम्पन्न भएपछि कुश्मानगरपालीका १२ देखि पोखरा सम्म जम्मा ३६ किलोमिटरमा पुग्न सकिन्छ । यसमा पनि सवैको चासो छ । छिट्टै यो काम पनि हुन्छ ।
४.शिक्षा,स्वास्थय,खानेपानी जस्ता आधारभुत आवश्यकताहरु पुरा भएका छन् ?
– यो बिषयमा खासै त्यस्तो समस्या छैन् । अहिले हाम्रो वडामा पानी,बिजुली,खाानेपानीको समस्या छैन् ।घर घरमा पानी पु¥याउने अबको हाम्रो लक्ष्य रकेको छ । ठुलीपोखरीको बाटुलेचौरमा खानेपानीको समस्या थियो । हाल त्यो समस्या पनि अब रहेन । गाउँभेला आयोजना गरेर हामीले घरघरमा खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौं । यस्तै ठुलीपोखरीको ठुलो पोखरीलाई पनि हामीले अव पर्यटकीय गन्तवयको रुपमा बिकास गर्छौ । यसलाई २४ सौं घण्टा पानीले भरिपुर्ण बनाउने तर्फ सोचीरहेकाछौं ।
५. अन्तयमा ,वडाध्यक्षको तर्फवाट तँपाईका जनतालाई सन्देश के छ ?
– त्यही ,हो हामीले विभिन्न आधारहरुमा काम गर्दैछौं । आजै समिक्षा गर्ने समय पनि भएको छैन् की जीस्तो मलाई लागछ । यो भयो यो भएन भन्दै हिड्न भन्दा पनि हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोस हामीले तँपाईहरुका माग पुरा गछौं । विकासका कामहरुमा हामी लागि रहेका छौं । अनुभुति हुने गरि काम पनि गर्छौ । केही गरिसकेका पनि छौं । ढुक्क हुनुहोस अबको ४ बर्षमा कुस्मा १२ ठुलीपोखरी गण्डकी प्रदेशको नमुना बन्छ । त्यसका लागि सवै वडावासी जनताहरुको साथ चाहिन्छ । अर्को कुरा म नेकपा एमालेवाट वडाध्यक्ष भएर आए पनि कुनै पनि राजनितिक दम्भ पनि देखाएको छैन् । केही पत्रकार मित्रहरुले हल्लाको आधारमा विभिन्न भ्रमपुर्ण समाचारहरु बनाउँनुहुन्छ म त्यस्तो बिषयको खण्डन गर्छु । आउनुहोस,बुझेर समाचार बनाउनुहोस् भन्छु । र,वडावासीहरुको साथपुर्ण रुपमा छ । थप सल्लाह र सुझावको पनि म अपेक्षा गर्दछु ।
काँग्रेस पुर्वमुख्य सचिव ऋिषिकेश तिवारीको प्रश्नः राजनिती जीवनका लागि की ?जीवन राजनितीका लागि ?	Saturday, November 3rd, 2018
‘ आन्तरिक र वाह्यि पर्यटक भित्राउनुको विकल्प छैन’:चित्रकला शर्मा भारती	Wednesday, August 15th, 2018
‘पुलिसिङ सवैले गर्नुपर्छ अनि शान्ति स्थापना हुन्छ ’ –डि.एस.पि तिवारी	Monday, August 13th, 2018
‘गाउँ फर्क अभियान पहिलो प्राथमिकता’ –भूषाल	Wednesday, August 8th, 2018
महिलालाई अधिकार दिलाउन् पुरुषको पनि साथ चाहिँन्छ :काफ्ले	Wednesday, August 1st, 2018
कोरला नाका पिच भएपछि कुश्मा सेण्टर बन्छ,व्यापारीको भबिष्य सुनिचित छ नआतिनुहोस–गोविन्द् आचार्य ।Merojilla.com	Friday, May 4th, 2018